Wariye u dhashay dalka Pakistan oo la dilay – Radio Muqdisho
Wariye u dhashay dalka Pakistan oo la dilay
Wariye caan ka ahaa dalka Pakistan laguna magacaabi jiray Khurram Zaki una dhaq dhaqaaqi jiray xuquuqda aadanaha, ayaa lagu toogtay magaalada Karachi ee dalka Pakistan.
Booliska Pakistan ayaa sheegay in rag hubeysan oo watay labo mooto ay xabado ku fureen. Khurram Zaki xilli uu ka casheeynayay maqaayad ku taal waddada dhinaceeda ee waqooyiga magaalada Karachi Labo ruux oo kale, ayaa ku dhaawacantahay rasaastii lagu furay wariyahaasi.
Ciidamada booliiska ayaa sheegay iney wadaan baaritaano la xiriira sidii loo soo qaban lahaa kooxihi ka dambeeyay dilkaasi, mana jirto Ilaa iyo hadda cid sheegatay weerarka lagu dilay wariyahaasi,
Khurram Zaki ayaa ahaa tifaftiraha bog lagu magacaabo “Aynu dhisno Pakistan” kaasi oo wax ka sheega dagaallada kooxeysiga, isagoo dhiirogeliya dimuqraadiyadda iyo mabaadi’da cilmaaniga.
Soomaali banaan bax ka sameeysay Sweden "Sawirro"